Umatshini wokucheba iinkozo zombona,ingqolowa,iimbotyi
1.Umatshini wokucheba iinkozo unokubhula kwaye uhlukanise imbewu kenel kunye nolusu ngexesha elinye.
2.Izinga lokuxobha ngaphezulu kwe 95%.
3.Ukusebenza ngokulula kunye nokugcina.
4.Ukonga amandla kunye nesakhiwo esifanelekileyo.
5.Umgangatho onokuthenjwa kunye nenkonzo ehamba phambili.
6.sinakho ukubonelela ngenkonzo ye-OEM kumatshini weerayisi kunye nomatshini wokucheba ukutya okuziinkozo.
Iinkcukacha zeMveliso yomatshini wokucheba iinkozo
Umatshini ka Zhengzhou Victor ubonelela ezinkulu, umatshini ophakathi wokudla okuziinkozo okuphakathi nencinci, kubandakanya ingqolowa,irayisi ,ingqolowa,iimbotyi zesoya, iipayi zegadi, kuphela, iimbotyi ezimnyama njl .Izi mini iinkozo kunye neembotyi zisetyenziswa kakhulu kwimveliso yomgubo wengqolowa ophezulu, ukutya iimbotyi, Ukukhutshwa kweprotheyini njl. Ukulandela utshintsho lwabantu ekutyeni nasekwaneliseni abantu ukuba bafumane ukutya kunye nezempilo, Umatshini osebenzayo wokucheba iinkozo kusetyenziswa ikakhulu umbona, irayisi, ingqolowa,ubusi kunye nokunye ,umatshini wokuxhuma iinkozo unokugqibezela ukususa ukungcola, ngxolile, Ukucocwa kwezityalo okuziinkozo ngexesha elinye.Ngaphezulu, iimveliso ezigqityiweyo zingahlelwa kwi-coarse ye-bran kunye ne-kernel ye-kernel ye-peeled ilungele umatshini ekhaya kunye nomgubo wengqolowa. Umatshini we-Corn peeler unezibonelelo zokubonakala okuhle, Isakhiwo esisebenzayo kunye nesengqiqweni, ukufakela ngokulula kunye nokusetyenziswa, ukulungisa ingxaki ngokulula kunye nokugcinwa, ukusebenza okuphezulu kunye nelahleko encinci.Njengokuba umatshini we-grian peeler unesixhobo sokwazisa ukunciphisa imisebenzi yokuqhubekisa,ukunciphisa kakhulu ubuninzi babasebenzi,kunye nokuphuculwa kwe-ergonomics yeli nqaku.weYile kwaye kuvelise umatshini ofanelekileyo wokuxebula ngokwemeko ekhethekileyo yabathengi okanye iimfuno. Umatshini wokucheba iinkozo uthunyelwe eKenya, Mekhsikho, Aljeriya, Filipayinzi,ENigeria njl.
Ulwakhiwo lomatshini wokucheba iinkozo
Lo matshini weenkozo wengca ngumatshini wokucheba i-iron roll rolling,umatshini wokucheba ukutya okuziinkozo ubukhulu becala une-inlet yokutya ,irola ephezulu yokugquma, isitulo esisezantsi, isitya sodonga sasekhohlo nasekunene, imngxunya yokukhupha, isitshetshe sokujika, sisa ezantsi,isixhobo sokucoca kunye namanye amalungu. Umatshini wokuxhuma umbona unesikhewu esisezantsi kweebhodi ezinokuntywila,isetyenziselwa ukulawula izinto ezingenayo. Idlala indima enkulu kumthwalo womatshini wokucheba iinkozo.
Umgaqo wokusebenza komatshini wokucheba ukutya okuziinkozo
Xa umatshini wokucheba iinkozo usebenza, ishafti ejikelezayo iqhutywa ngamandla. Isigubhu esine-spiral groove siqala ukujikeleza kwicala lokuphela kokuphela. Izinto ezingafunekiyo zingena esiphelweni somatshini wokucheba wengqolowa ngakwicala le-hopper evulekileyo nevaliweyo. Njengoko kukho indawo ethe tyaba kumphezulu wegubhu, Izinto eziluhlaza ziyithuthwa kwaye zihanjiswa ziye ngasekunene. Ngaphantsi kwesantya esiphakathi sedrum, isitudiyo sivelisa uxinzelelo lwangaphakathi, ukunyanzela amabele kunye nommese ukugcina unxibelelwano kunye nokuqhekeka kwaye iqokobhe linqunyulwe. Ngaxeshanye, I-spindle pulley iqhubela isigubhu somoya ukuba ujikeleze, kwaye iinkozo ezisetyenzisiweyo zihamba ngakwizibuko lokukhuphela kwaye zahlula kwigumbi lokucoca umatshini wokucheba iinkozo. Ngokokulinganiswa kwezinto ezibonakalayo zahlukile, ilayiti elula kwisigubhu sokutsala phantsi komoya, ecaleni kwescreen (I-engle) yehlisa kancinci, Gqibezela ukulungiswa kwengqolowa kwaye ekugqibeleni ungene ebhomeni.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokuxhuma iinkozo
Ukondla ubungakanani bezibuko
Ubungakanani bezibuko lokuphuma
ividiyo yomatshini wokucheba izinkozo
Nxibelelana nomatshini womatshini wokukhulisa ukutya okuziinkozo